Nyanzvi Dzozeya Makatanwa neMhirizhonga Zviri muMDC-T
Nyanzvi munyanya dzematongerwo enyika pamwe nemitemo dzinoti mhirizhonga iri kuitika mubato guru rinopikisa iri kukonzerwa nenyaya yekuti vakuru vakuru mubato iri havasi kutevedza nzira dzekugadzirisa kusawirirana sezvinodiwa nemitemo yebato.
Mudzidzisi wepaUniversity of Zimbabwe, Professor Charity Manyeruke, vaudza Stduio 7 kuti nyonga iri kuitika mubato reMDC inosvibisa chimiro chenyika yose.
Vati kurwisana kuri kuitika uku kunoratidza kusarongeka mubato iri uyewo kunoburitsa pachena kuti vatungamiri vebato iri havasi kutevedzera gwara rebato ravo.
Vati bato rega rega rine bumbiro remitemo rinoratidza kuti nyaya dzinogadziriswa sei kana paita kupokana.
Professor Manyeruke vanoti dai bumbiro rebato iri richitevedzwa pangadai pasina kurwisana kuri kuitika muMDC-T.
Gweta, VaAbraham Mateta, vanoti zvinosuwisa kuti nyaya yemhirizhonga yave kushandiswa zvakanyanya kugadzirisa kuswaririrana mumapato ezvematongerwo enyika.
Vanoti zvakakosha kuti MDC-T sebato rinoti rinomirira hutongi wejekekerere, ritevedze bumbiro raro.
Vati pese panoitika gakava, kutaurirana ndiko kunopedza nyaya kwete kupondana.
Mumwe mugari wekuGoromonzi, VaJohn Manyanya, vaudza Stduio 7 kuti zviri pachena kuti pane zvimwe zvinhanho zvisina kutevedzwa panyayayekurwira hutungamiriri muMDC-T uye izvi ndizvo vave kukonzera kurwisana mubato iri.
Pane kurwisana kunotyisa mubato reMDC-T zvichietevera kushaya kwevaimbotungamira bato iri, VaMorgan Tsvangirai, mwedzi wapfuura.
Mumwe wevaive vatevedzeri waVaTsvangirai, Muzvare Thokozani Khupe, vanoti ndivo vanofanira kutungamira bato iri zvichitevera kufa kwaVaTsvangirai, sezvinodiwa nebumbiro ravo.
Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato, VaElias Mudzuri vaidawo matomu asi VaChamisa ndivo vakazodomwa neNational Council yebato iri kuve mutungamiri webato iri chinove chinhu chaipikikiswa nemunyori webato iri, VaDouglas Mwonzora, nevamwe vakururu vakuru vakaita saVaObert Gutu, avo vakamiswa kuve mutauriri webato iri svondo rapfuura.
Dzimwe nyanzvi dzemutemo dzinoti dzino bvumirana naVaMwonzora kuti paita kupokana kwakadai paifanirwa kuendwa kumusangano wekongiresi wechichimbi wekudoma mutungamiriri mutsva kana kuenda kuTribunal.
Asi Prof Manyeruke vati kubvira mazuva aVaTsvangirai bato iri haritevedzi bumbiro raro uye rinoshandisa mhirizhonga kuranga avo vanenge vasingapindirane nevavo vari muhutungamiri.
VaMateta vaudza Studio7 kuti mutungamiri weMDC –T, VaNelson Chamisa, vanofanira kugadzirisa nyaya yemhirizhonga, vachiti ivo pachavo, inogona kuvaparadza mune remangwana.
Dzimwe nyanzvi dzinoti gakava riri muMDC-T riri pamusoro pezvinoreva bumbiro rtemitemo kana mutungamiri webato ava.
Dzinoti izvi ndizvo chete zvaifanirwa kuitwa bato rofambira, kwete kutungamidza nyaya yekuti anofarirwa nevanhu vakawanda ndiyani?
Nyanzvi idzi dzinotiwo nyaya yekuti ane chaunga ndiyani inofanirwa kuitwa mushure memwedzi gumi nemiviri zvichitevera kushaya kwaVaTsvangirai, sezvo bato richisungirwa kuenda kukongiresi mushure mekunge radoma mutevedzeri wemutungamiri webato kuti afanobata chigaro.